Nkebi 1 - GỊNỊ KA ANYỊ MEE unu OZI?
Mgbe ị na-azụta ihe si anyị ụlọ ahịa, dị ka akụkụ nke na-azụ ahịa na n'ire usoro, anyị na-anakọta ozi nkeonwe ị na-enye anyị dị ka aha, adreesị na email address.
Mgbe ị na-agagharị anyị ụlọ ahịa, anyị na-akpaghị aka na-enweta gị na kọmputa na internet protocol (IP) adreesị iji nye anyị na ọmụma na-enyere anyị na-amụta banyere ihe nchọgharị gị na sistemụ.
Email ahịa (ma ọ bụrụ na ọdabara): With gị ikike, anyị nwere ike izitere gị ozi ịntanetị banyere anyị ụlọ ahịa, ọhụrụ ngwaahịa na ndị ọzọ mmelite.
Nkebi 2 - nkwenye
Olee otú ị ga-esi m nkwenye?
Mgbe ị na-enye anyị na onye ozi mezue a azụmahịa, nyochaa gị kaadị, ịtụ, mee ndokwa ka a nnyefe ma ọ bụ laghachi a zuo, anyị na-egosi na ị kwenye na anyị kpokọtaworo ya na-eji ya maka na kpọmkwem ihe mere naanị.
Ọ bụrụ na anyị na-arịọ maka ozi gbasara gị maka a abụọ mere, dị ka ahịa, anyị ga-ma na-arịọ gị na gị kwuru nkwenye, ma ọ bụ nye gị ohere na-ekwu enweghị.
Olee otú m ịdọrọ m nkwenye?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye, ị gbanwere uche gị, ịnwere ike ịhapụ nkwenye gị ka anyị kpọtụrụ gị, maka nchịkọta, iji ma ọ bụ ikpughe nke ozi gị, n'oge ọ bụla, site na kpọtụrụ anyị
Nkebi 3 - ngosi
Anyị nwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị ma ọ bụrụ na anyị na-achọrọ site na iwu ime otú ahụ ma ọ bụrụ na ị na-emerụ anyị Okwu nke Service.
Nkebi 4 - SHOPIFY
Your data na-echekwara site Shopify si data nchekwa, ọdụ data na izugbe Shopify ngwa. Ha na-echekwa gị data na a ala na ihe nkesa na-akpata a firewall.
Ọ bụrụ na ị họrọ a kpọmkwem ugwo ụzọ ámá iji wuchaa gị zụọ, mgbe ahụ, Shopify echekwa gị kaadị data. Ọ na-ezoro ezo site na Ịkwụ Ụgwọ Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Gị zụọ azụmahịa data na-echekwara na dị ka ogologo oge dị mkpa iji wuchaa gị zuo azụmahịa. Mgbe ahụ zuru ezu, gị zụọ azụmahịa ọmụma na-ehichapụ.
Ọnụ ụzọ nkwụnye ụgwọ niile na-agbaso ụkpụrụ nke PCI-DSS dịka nke PCI Security Standards Council na-achịkwa, nke bụ ihe jikọrọ aka nke ụdị dị ka Visa, MasterCard, American Express na Discover.
PCI-DSS chọrọ enyere hụ na ala njikwa nke kaadị ozi site anyị ụlọ ahịa na ya na enye ọrụ.
Maka nkọwa ndị ọzọ, ị nwekwara ike ịchọrọ ịchọta Ozi Ahịa nke Shopify ebe a ma ọ bụ Nkwupụta Nzuzo ebe a.
Nkebi 5 --atọ ndị ọzọ Ọrụ
Ke ofụri ofụri, atọ ndị ọzọ na enye eji anyị ga na-anakọta, iji na igosipụta ozi gị ruo n'ókè dị mkpa na-ekwe ka ha na-arụ ọrụ ha na-enye anyị.
Otú ọ dị, ụfọdụ-atọ ndị ọzọ na-enye ọrụ, dị ka ịkwụ ụgwọ gateways na ndị ọzọ ụgwọ azụmahịa processors, nwere onwe ha nzuzo atumatu na-akwanyere ndị na ozi anyị na-chọrọ na-enye ha maka gị zụọ metụtara azụmahịa.
N'ihi na ndị a na enye, anyị nwere ike ikwu na ị na-agụ ha nzuzo atumatu otú i nwere ike ịghọta n'ụzọ nke ozi nkeonwe gị ga-edozi site ndị a na enye.
Karịsịa, cheta na ụfọdụ ndị na-enye ọrụ nwere ike ịbanye n'ime ma ọ bụ nwere ụlọ ọrụ ndị dị na ikike dị iche karịa ma gị ma ọ bụ anyị. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ịmalite azụmahịa nke gụnyere ọrụ nke onye na-ahụ maka ọrụ ndị ọzọ, mgbe ahụ ozi gị nwere ike ịdọrọ n'okpuru iwu nke ikike (s) nke onye ọrụ ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ya dị.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-dị na Canada na azụmahịa gị na-esichara site a ugwo ọnụ ụzọ ámá dị na United States, mgbe ahụ, gị onwe onye ozi-eji na-emecha na azụmahịa nwere ike ịbụ na isiokwu ngosi n'okpuru United States iwu, gụnyere Patriot Act.
Mgbe ị pịa na njikọ na anyị ụlọ ahịa, ha nwere ike iduzi gị pụọ anyị na saịtị. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka omume nzuzo nke saịtị ndị ọzọ na-agba gị ume na-agụ nkwupụta nzuzo ha.
Nkebi 6 - Nche
Iji chebe onwe gị ozi, anyị na-ezi uche anya ma na-eso ụlọ ọrụ mma omume iji jide n'aka na ọ na-adịghị na-ekwesịghị ekwesị efu, mebie ihe,-enweta, mara, gbanwere ma ọ bụ bibie ya.
Ọ bụrụ na ị na-enye anyị ozi kaadị akwụmụgwọ gị, ezoro ezo ozi na iji teknụzụ dị na ntanetị anya (SSL) ma chekwaa ya na ezoro ezo AES-256. Ọ bụ ezie na usoro ntinye ọ bụla nke Intanet ma ọ bụ nchekwa nchekwa bụ 100% echekwara, anyị na-agbaso ihe niile PCI-DSS chọrọ ma mejuputa ụkpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ a nabatara.
Nke a bụ ndepụta nke kuki anyị na-eji. Anyị edepụtara ha ebe a ka ị nwee ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ na kuki ma ọ bụ.
_session_id, pụrụ iche aka ahụ, sessional, Enye ohere Shopify iji chekwaa ihe ọmụma banyere gị nnọkọ (Referrer, ọdịda page, wdg).
_shopify_visit, ọ dịghị data ẹkenịmde, Persistent maka 30 nkeji si ikpeazụ nleta, na-eji anyị website eweta si esịtidem stats tracker idekọ ọnụ ọgụgụ nke nleta
_shopify_uniq, ọ dịghị data ẹkenịmde, expires n'etiti abalị (ikwu na esenowo) nke na-esote ụbọchị, na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke nleta a store site otu ahịa.
cart, pụrụ iche aka ahụ, persistent maka 2 izu,-echekwa ihe ọmụma banyere ihe dị n'ime gị ụgbọ.
_secure_session_id, pụrụ iche aka ahụ, sessional
storefront_digest, pụrụ iche aka ahụ, ruo mgbe ebighị ebi Ọ bụrụ na ndị ụlọ ahịa nwere a paswọọdụ, nke a na-eji na-ekpebi ma ọ bụrụ na nke ugbu a esenowo nwere ohere.
Nkebi 7 - Age nke nkwenye
Site na iji saịtị a, ị na-anọchi anya na ị na-ọ dịkarịa ala, afọ ọtụtụ gị ala ma ọ bụ ógbè nke obibi, ma ọ bụ na ị na-afọ nke ọtụtụ gị ala ma ọ bụ ógbè nke obibi na i nyere anyị nkwenye gị na-ekwe ka ihe ọ bụla nke gị obere dependents iji saịtị a.
Nkebi 8 - mgbanwe a na Nzuzo
Anyị na-doputa nri iji gbanwee nke a na iwu nzuzo mgbe ọ bụla, ya mere, biko nyochaa ya ugboro ugboro. Mgbanwe na doo anya ga-mmetụta ozugbo n'elu ha ikenye na website. Ọ bụrụ na anyị na-eme ihe onwunwe mgbanwe a iwu, anyị ga gwa gị ebe a na ọ na e emelitere, nke mere na ị maara nke ihe ọmụma anyị na-anakọta, otú anyị na-eji ya, na n'okpuru ihe ọnọdụ, ma ọ bụrụ na ọ bụla, anyị na-eji na / ma ọ bụ igosipụta ya.
Ọ bụrụ na anyị ụlọ ahịa na-enwetara ma ọ bụ jikọrọ ya ọzọ ụlọ ọrụ, gị ozi nwere ike zigara ọhụrụ nwe ka anyị wee nọgide na-ere ngwaahịa gị.
Ajụjụ na ozi kọntaktị
Ọ bụrụ na ịchọrọ: ịnweta, dozie, gbanwee ma ọ bụ hichapụ ozi ọ bụla anyị nwere maka gị, denye aha mkpesa, ma ọ bụ naanị chọrọ ka ọmụma ndị ọzọ kpọtụrụ anyị